गोकर्णेश्वरमा अर्गानिक खेतीमा कृषकको आकर्षण - Gokarna News from Nepal
बुधबार, फागुन १४, २०७६
गोकर्णेश्वरमा अर्गानिक खेतीमा कृषकको आकर्षण
काठमाडौं– शहरदेखि गाउँसम्म अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्ने होडबाजी चल्न थालेको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य मात्र होइन, जैविक पर्यावरणका लागि पनि अर्गानिक उत्पादन आवश्यक छ । तर, अर्गानिक तरकारीको मूल्य केही महंगो हुने भएकाले उपभोक्ताको सोच भने परिवर्तन हुन नसकेको कृषकको गुनासो छ ।
काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका कृषक गाउँमै अर्गानिक तरकारी फलाउने होडबाजीमा छन् । एकातिर जैविक पर्यावरण जोगाउने र अर्कोतिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै कृषकहरु अर्गानिक खेती प्रणालीमा केन्द्रीत हुन थालेका छन् । तर, उपभोक्तामा सचेताना आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
गोकर्णेश्वर–१ मुलखर्कका शुकबहादुर तामाङले अर्गानिक तरकारी खेतीबाट मात्रै मासिक ६० हजार आम्दानी गर्छन् । उनीमात्रै होइन कुरीगाउँ, ओख्रेनी, चिलाउने गाउँका २८ कृषक परिवार पनि अर्गानिक खेतीमै रमाएका छन् । उनीहरुले काउली, गोलभेंडा, आलु, प्याज, सिमी लगायतका तरकारी बाली उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
मुलखर्क बागमती जलाधार क्षेत्रको माथिल्लो तटिय क्षेत्र भएकोले पनि कृषकहरु आफूले उत्पादन गर्ने तरकारी बालीमा रासायनिक मल र किटनाशक औषधिको प्रयोग गर्दैनन् । खेतबारीमा प्रयोग गरीएको किटनाशक औषधि र रासायनिक मल पानीले बगाएर बागमतीमा पुग्ने डरले पनि कृषकहरु सचेत छन् । पारिस्थितकिय प्रणालीलाई बलियो बनाई राख्न र जलधार क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाइराख्न गाउँमा अर्गानिक खेतीको अवधारणा ल्याइएको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
विषादी प्रयोग गरि उब्जाईएका तरकारी र फलफूलभन्दा जैविक मलको प्रयोग गरिएका उत्पादन तुलनात्मक रुपमा महङ्गो भएपनि तिनको माग भने बढ्न थालेको छ । अर्गानिक तरकारी र फलफूल तुलनात्मक रुपमा २० देखि ३० प्रतिशतले महङ्गो हुने गरेको छ । स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरु आफ्ना ग्राहक रहेको कृषकको भनाइ छ ।
अहिले नेपालका थोरै भागमा मात्रै अर्गानिक तरकारी खेती हुँदै आएको छ । हिजोआज बजारमा देख्दा चम्किलो, सर्लक्क परेको र किरा नलागेको विषादीयुक्त उत्पादनलाई भन्दा बढी पैसा अर्गानिक उत्पादनलाई तिर्न अन्कनाउने ग्राहकको कमी भने छैन् । विकट जिल्लामा उत्पादन हुने मौसमी फलफूल र तरकारीको भरपर्दो र सुलभ ढुवानीको व्यवस्था गरिए उपभोक्ताले सस्तो दरमै गुणस्तरयुक्त तरकारी र फलफूल खान पाउने निश्चित छ ।
पशुपतिमा शिवरात्री मनाउन आएका बाबाको गीत सुनेर सबै चकित (भिडियोसहित)
महाशिवरात्रिमा यस्तो छ ट्राफिक व्यवस्थापनको तयारी (रुटसहित)
पशुपतिमा महाशिवरात्रिको तयारी भव्य, यसो भन्छन् नेपाल आएका नागाबाबा (भिडियोसहित)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालको उम्मेदवारी घोषणा
श्रीमतिको डेरा जाने भट्टराईमाथि कार्बाही माग्दा एसपीले भने– ‘तैले सकिनस् अर्कैले गर्‍यो त के भयो ?’
हेलिकप्टरबाट उद्धार हुन नसक्दा निधनः दाईले भने– ‘माफ गर बहिनी, केक बोक्ने हेलिकप्टरले तिमीलाई बोक्न सकेन !’
शेयर बजार अर्को नयाँ रेकर्ड, अर्थमन्त्री बाहिरिने देखिएपछि लगानीकर्ता उत्साहित
अबको शिक्षा प्रणालीमा ८० प्रतिशत प्राविधिक धार हुुनुपर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दिए चेतावनी
नेपाल ट्रष्टको जग्गाबारे सार्वजनिक स्वेतपत्रप्रति कांग्रेस सभापति देउवाले जनाए आपत्ति
दिल्ली हिंसामा मृतकको संख्या २२ पुग्यो, मुख्यमन्त्री केजरीवालले गरे सेना परिचालनको माग
ए डिभिजन लिगः दिपेशले अशोकलाई गरेका थिए म्याच फिक्सिङको अफर
वाह सीइओ होस् त यस्तो ! कार्यालयभित्रै सीईओ छमछमी नाचेपछि… (भिडियो)
सरस्वतीका कप्तानलाई २ वर्ष प्रतिबन्ध, हिमालयन शेर्पाका व्यवस्थापकलाई ३० हजार जरिवाना
अजयको तान्हाजीले बनायो यस्तो रेकर्ड !
तोलाको ८० हजारमा कारोबार भएको सुनको मूल्य घट्यो, आज कति ?